Liiska codsiyada la qaadan karo ee loogu talagalay GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Liiska codsiyada la qaadan karo ee GNU / Linux
Markaad la shaqeyneyso shaxanka, badanaa waxaan isticmaalaa Inkscape, Gimp y XaraLX. Tan dambe, waxa ka sarreeya oo dhan, waxaa laga helaa bakhaarrada Ubuntu laakiin kuma jiraan kuwa Debian oo sidaas darteed ma awoodin inaan rakibo, maxaa yeelay ku tiirsanaanteeda mar dambe lama jaanqaadi karaan kuwa Tijaabada Debian.
Anoo raadinaya shabaqa aan helay XaraLX Qaabka la qaadan karo, laakiin waxaan layaabay, taasi maahan codsiga kaliya ee la heli karo. Meesha La qaadan karo Linux Waxaan ka heli karnaa buuggaag badan oo codsiyo ah oo ay abaabuleen qaybo kala duwan: Cod & Muuqaal, Audio, Video, Horumarinta, waxbarashada, Ciyaaraha, Graphics, Internet, Xafiiska, qaabeynta, Nidaamka y Adeegga
Waxaan fiirinayay qayb kasta oo waxaa jira codsiyo aad u xiiso badan, xitaa kuwa badan oo aan caadi ahaan u isticmaalo iyo kuwo kale oo aanan xitaa ogeyn. Aan aragno tusaalooyin ka mid ah codsiyada la qaadan karo oo aan ka heli karno:
1 Cod & Muuqaal
Cod & Muuqaal
Iyaguna keligood maahan, kuwa badan baa jira. Si aan u isticmaalno kaliya waa inaan soo dejisanaa midka aan dooneyno oo aan siino rukhsad dil ah. Gudaha Debian waa inaan hubinaa in isticmaaleheena uu ku jiro kooxda caymiska. Haddii kale, waxaan ku darnaa:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Liiska codsiyada la qaadan karo ee GNU / Linux
Hagaag, kani waa mid xiiso leh oo ku saabsan barnaamijyada la qaadan karo, waxa dhaca ayaa ah in yeelashada diro ay ku shaqeeyaan xirmooyin kala duwan waxay i siinayaan xoogaa iswaafajin duub ah.
Waxaan u maleynayaa inay tahay inay ka shaqeyso wax kasta oo disto ah. Hadda waxaan la shaqeynayaa Xara iyo Deadbeef la qaadi karo
Mar dambe cudurdaar uma lihid inaadan tagin Arch ... si fiican, Xara ayaa kaaga shaqeyn doonta Arch 🙂
Ma arko sababta aan u tagayo qaanso, haddii dhammaan walxaha kala duwan marka laga reebo kuwa aan la magacaabi karin ay isku mid yihiin.
Tani waxay ahayd faahfaahsan ... taas oo ka tagtay Arch ilaa Debian maxaa yeelay Xara si fiican uma uusan ururin.
Sababtaas maahan oo keliya .. laakiin maxaa yeelay waxaan haystaa xirmooyin badan oo ku jira repo-ga caadiga ah. Arch waa inaan ku ordo labo ilaa seddexdii kasta AUR oo aan soo ururiyo
Sidee la yaab leh waxa kugu dhacaya Arch had iyo jeer, waligey kuma aanan sameyn taas
waa maxay "unnameable" distro xD ahahaha
Wax ku darsasho aad u wanaagsan. La qaadan karo 😀
Runtii ma waxay ahayd inaad isku duba rido barnaamij kasta (Aur) Arch ???
Waxaan isticmaalaa Aur marar badan, uma baahni inaan uruuriyo
waad salaaman tihiin .. hal su'aal: waa maxay keydadka aad ku leedahay baaritaanka debian-ka?
Kaliya kuma hayaan dhowr codsi oo wanaagsan. Waxay kaloo leeyihiin aalado ay ku abuurtaan barnaamijyo kuu gaar ah oo "la qaadan karo" ah. Waxaan horey u sameeyay tijaabooyin.
Maxay tahay waxa wanaagsan ee aad ku talinayso. leeyihiin qolofta gnome iyo usea .deb? oh iyo in u shaqeeyaa desktop
waana taa ubuntu xD
Ma qasabbaa inaad isticmaasho .deb? Taasi miyay tusaale ahaan tahay OpenSUSE, Fedora, Sabayon ama Mageia waxay leeyihiin GNOME-Shell oo waan ogahay inay aad u wanaagsan yihiin habsami u socodkooda laakiin midkoodna uusan isticmaalin .deb ... ma dhabbaa inay tahay baahi aan laga maarmi karin?
Inay leedahay .DEB xirmo ahaan, taas oo u oggolaanaysa Gnome3 + Shell ... si fiican, LinuxMint ama Debian, doorbidayaa tan labaad second
Debian midkee? kan 6aad ama imtixaanka?
Haa Isticmaalka Debian 6 (Stable current) waxay adeegsaneysaa codsiyo aad u dhacsan, waa inaad isticmaashaa Tijaabinta lagana yaabee, haddii aad u baahatid, Debian Unstable (ha ka baqin magaca haha).
diyaar u ah baaritaanka debianka .. waxaan rabaa inay yihiin meelaha wax lagu kaydiyo oo wanaagsan 😀 ma waxaad ku leedahay qaar halkaas jooga oo wanaagsan
Keydadka wanaagsan? O_O… maxaa qaar fiican ka dhiga kuwa kalena xun O_0U… 🙂
Waxaan u maleynayaa inay dhammaantood isku mid yihiin, ama ku dhowaad isku mid yihiin ... isticmaal kuwa rasmiga ah, anigu garan maayo haha, elav wuxuu awood u yeelan doonaa inuu kaa caawiyo si ka wanaagsan, isagu waa iga Debian badan yahay ^ _ ^
Waxaan isticmaalaa Linux Mint, oo ku saleysan Ubuntu laakiin tan haddii ay dhageysato bulshada una ogolaato inay ka qeybgalaan, iyadoo aan la xusin inay had iyo jeer bilaabeyso mashaariic heerkeedu yahay Cinnamon, tusaale ahaan.
midka ugu fiican waa crunchbang, oo ku saleysan debian dhammaan keydkiisa, waa mid joogto ah maxaa yeelay barnaamijyada oo kaliya ayaa la cusbooneysiiyaa, aad u fudud, waxaan u isticmaalaa isbarbardhigayga isbarbardhiga isbarbardhiga ee iskudhafka ah, oo loo habeeyay dhadhanka, iwm, iwm ... hel mid kale oo aniga iisoo raacaya, caddeeya zlitaz, suse, mandriva, ubuntu, xubuntu, iyo qaar kaloo badan, dhibaatada ugu weyni waxay tahay aniga oo aan garanaynin (ama aanan xiisaynaynin) wax ururinta, haddii aan doonayo barnaamij waan rakibay kaydinta ama internetka xxxxx.deb waana intaas
Ku laabo ragga blogga 8D
Waxyaabahan barnaamijyada bilaashka ah ee la qaadi karo iguma aha wax igu cusub, waxaan u iri maxaa yeelay waxaan u isticmaalaa codsi daaqadaha loo yaqaan 'portableapps' oo inta badan adeegsada barnaamijyo bilaash ah. Laakiin waa markaan ku caasiyoobo fasalada ay rabaan inay i bartaan barnaamijyada xidhan oo aan ku xujeeyo macalinka inuu sameeyo isla isla markaana uu kaga sii fiicnaado barnaamijka xD bilaashka ah
Waxay u egtahay inay wanaagsan tahay in horey loo sii qaadan karo si toos ah loogu isticmaalo Linux: 3
HAHA Dib-u-soo-dhawow HAHAHA.
Haa haa, waan ogahay APP-ga aad tiraahdo ... uff maxaa xusuusta haha, waxaan haystay 2GB pendrive kaliya haha.
Waxa kaliya ee xun ee boggan ku saabsan ayaa ah in codsiyo badan ay waqtigoodii dhammaadeen, kuwa kalena xitaa ay si aad ah u duugoobeen ... Firefox 6? Chromium 8? taasi waa mid aan la cafiyi karin ...
Sida toos loogu kiciyo nidaamka kale ee hawlgalka midnimo
Terminalka leh: Ka dhig barafku inuu ku daato qalabkaaga